မန္တလေးမြို့လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်းကို ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသူတစ်ဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ
Posted by gyanpone on May 13, 2019
ကျနော်တို့ညီကိုသူတို့နဲ့ရန်ညှိးရန်စလဲမရှိပါဘူးဗျာ ..အဲ့နေ့ကကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့အပြင်ထွက်မိတာပါ…ဘာရန်ညှိးရန်စမှမရှိပါဘူး….သက်သက်မဲ့ကိုလိုက်ပြီးလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ…ပထမတစ်ချက်ပစ်တော့သတိမထားမိဘူးသြော် ကားကဂဲနင်းမိလိုချော်မှန်တာပဲနေမှာပါဆိုထားလိုက်တယ်…
အဲ့အချိန်မှဘီယာဆိုင်ထဲ ကလူတွေဝိုင်းအုံပြီးထွက်လာကျတယ်…ဒါမှကျနော်လဲသူတို့ရဲ့ အသက်ဘေးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်..သွေးတွေစီးအိုင်ကျနေတဲ့ကျနော့်ကိုကောက်ထူးရင်းဘေးမှာရှိတဲ့ ၂၄နာရီဆေးခန်းကိုကျနော့်ညီကဆွဲခေါ်သွားတယ်.
ဝယ်ပြီးပြန်လာတော့လဲသူ့အပ်နဲ့ပဲချုပ်ပေးတော့မယ်ဆိုပြီးချုပ်ပေးတယ်..သေရမယ်နာတွေဆိုသေနေလောက်ပြီ သူတို့လုပ်နေတာနဲ့တင်ချုပ်လဲပြီးရောမှု့ ခင်းရဲရောက်လာပါလေ ရောကျနော့်ကိုနာမေးတယ်အသက်မေးတယ်ဘယ်မှာနေတာလဲမေးပြီးရောဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ဒဏ်ရာရတာလဲတဲ့မေးတယ်…၇၈လမ်း၃၈လမ်းထောင့်လို့လဲပြောရောဘာမှဆက်မ မေးတော့ဘူး…
.မနေ့ကလဲအဲ့လိုပဲလေးဂွနဲ့လိုက်ပစ်ခံရလို့အမှတ်( ၉ )ရဲစခန်းကိုသွားတိုင်တာတဲ့လေးဂွနဲ့ပစ်တဲ့အမှုတွေများ နေပြီတဲ့ကျနော်တို့ဘယ်လိုက်ဖမ်းရမှာလဲတဲ့…?ကျနော်ပြော ချင်တာကရဲဆိုတဲ့အမျိုးကဘယ်နေရာမှာလူမိုက်ရှိတယ်…? ဘယ်နေရာမှာသူခိုးဂျပိုးရှိတယ်…?ဘယ်နေရာမှာမူးယစ်သူရှိ တယ်ဆိုတာသူတို့အပိုင်သိပြီးသားပါဗျာ…
အခုဟာကတာဝန်မဲ့ တဲ့စကားကြီးပြောထွက်ရက်တယ်…သူတို့ဖမ်းချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါဒီလိုကြီးတာဝန်မဲ့စကားတော့ပြောမထွက်ရက်သင့်ဘူး…?ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ သေချာစုံစမ်းပေးပါ့မယ်အမှုအမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်အမြန်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ်ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်အားရအောင် တော့ပြောပေးသင့်ပါတယ်…..
ကျနော်မဖြစ်ခင်သတင်းတစ်ခုကြားမိသေးတယ်…မြစ်သစ်ဘက်မှာလဲလူရိုက်ပြီးလုပြေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုပြာ်သူတွေကဝိုင်းဖမ်း ရဲလက်ကိုအပ်ခဲ့ကျတယ်တဲ့မကြာပါဘူးမနက်မိုးလင်းတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဗျာ…ကျနော်တွေးမိတာလေးပေါ့ဗျာ အဲ့ဆိုအဲ့လုယက်ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတွေနဲ့ကရသမျှကိုတဝက်စီယူပြီးလုပ်စားနေကျတာလားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပိုက်ဆံရှိသားသမီးတွေကဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီးအဲ့ထဲကိုလိုလိုက် လုပ်ရဲနဲ့ပူးပေါင်းတဝက်စီခွဲယူ…ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကရဲတွေကို ပြန်ပြီးခြိမ်းခြောက်ထားလို့ဒါမှမဟုတ်ရဲသားသမီးတွေလားလို့ ကျနော်တွေးမိတယ်….
ကျနော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်ရဲကိုအဖေခေါ်ပြီးဘယ်သူ့ကိုအားကိုးရတော့မှာလဲဗျာ…ထိခိုက်နစ်နာနေတဲ့ကျနော်တို့လိုပြည်သူတွေလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေကျတော့မှာ လား..?ကျနော်တို့ပြည်သူတွေသေပေးရတော့မှာလား….? အခုလိုချိန်မှာခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေဆိုဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ပြီး ကြည့်နေကျမှာလာ….? ခင်ဗျားတို့ယူနေတဲ့လစာ…????
ခင်ဗျားတို့အတွက်နဲ့တကယ်ပြည်သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ရဲအရာရှိတွေလဲသိက္ခာကျတယ်…ပြည်သူကိုတကယ်ချစ်တဲ့ရဲ အရာရှိတွေလဲလူမုန်းခံရတော့မယ်….ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးလောက်အသိဥာဏ်မရှိကျတော့ဘူးလားဗျာ…..
Nway Oo Mg